Ku kasbo lacag khadka tooska ah | Ebuno
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lacag looga helo internetka!
Sameynta lacagta khadka tooska ah labadaba waa caqli, madadaalo iyo hab fudud oo lagu kordhiyo lacagta gurigaaga.
Lacag Ku Samee Baadhitaannada
Tusaalooyinka sida ay suurtogalka u tahay in lacag lagu helo internetka waa ku biiridda qolladaha sahaminta kala duwan sida Ebuno.net, Din Åsikt iyo Mobrog. Bogaggan waxaad kaga jawaabaysaa sahanno kadibna waxaad kasbatay lacag ama dhibco lagusoo qaatay tusaale ahaan hadiyadda hadiyadda ama koontada PayPal ama koonto bangi.
Hab kale oo lacag looga helo internetka ayaa ah in dib loo eego xubinnimada kala duwan.
Haddii aad ka adeegato khadka tooska ah ee dukaamada sida Åhléns, Apotek Hjärtat, Lagerhaus iyo Clas Ohlson si aad u magacawdo waxyar, waa fikrad aad u wanaagsan inaad xubin ka noqoto oo aad sidaas ku kasbato dhibic iibsi kasta oo aad ka sameyso khadka tooska ah ee dukaan kasta, qodobbadan ayaa badanaa ah loo beddelay hubinta qiimaha xubinnimada taas oo loo adeegsado wax iibsi kasta oo khadka tooska ah ah oo dhammaadka waxaad lacag uga heleysaa internetka si fudud oo habsami leh.
Lacag Ku Samee Cashbacks
Hab kale oo caqli-gal ah oo caqli-gal ah oo lacag looga helo khadka tooska ah ayaa ah in had iyo jeer loo maro bogga lacag-celinta / dib-u-celinta si loo helo lacag-celin dhammaan iibsiyada internetka.
Bogagga sida Refunder, Cashbacker, Shopbuddies iyo MyBonus waxay leeyihiin dhowr boqol oo dukaanno isku xiran. Iibsashada 2500 SEK ee Ellos.se oo ay la socoto lacag celin / soo celin 10% ah waxay ku siinaysaa 250 karoon lacag celin ah oo aad ka bixisay lacagta dhabta ah, halkan waxaa ku yaal lacag aad u fara badan oo internetka lagu kasbado!
Sidoo kale waa wax fiican inaad lacag ku sameyso khadka tooska ah adoo kormeeraya isla markaana isbarbar dhigaya badeecooyinka iyo alaabada ku jira bogagga sida PriceSpy iyo Pricerunner Waxaad si otomaatig ah u heleysaa ogeysiisyo markii qiimo dhimis ay ku timaado badeecooyinka / alaabada la kormeerayo. Halkan waxaad ka kasban kartaa lacag aad u tiro badan khadka tooska ah, gaar ahaan marka wax weyn la soo iibsanaayo sida. mashiinka dharka lagu dhaqo, kombiyuutarka ama TV shaashad fidsan, wuxuu kumanaan u kala saari karaa dukaamada kala duwan ee internetka isla shayga.
Ugu dambeyntiina, qaab hal abuur leh oo lacag looga helo internetka ayaa ah inaad iibsato alaabo / dhar aan xilligooda ku jirin. Tusaale aad u wanaagsan ayaa ah inaad iibsato jaakad guga xilliga dayrta, jaakad jiilaal xagaaga ah ama kabo xagaaga oo fiican ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha, alaabooyinkan badanaa si weyn ayaa looga dhimayaa dukaamada internetka waxaadna si dhakhso ah uga kasbatay lacag khadka tooska ah.
Haddii aadan rabin inaad iibsato wax cusub, way fududahay inaad adeegsato bogagga sida Tradera oo aad ku dalbato dhar / kabo / alaabo la isticmaalay oo aan ku jirin xilligii loogu talagalay maxaa yeelay iyaga ayaa markaa la raadsadaa markaa.
Weligaa ha iloobin inaad u marto bogga soo celinta / kaashka ee dhammaan iibsiyada internetka, hab fiican oo xiiso leh oo lacag looga helo internetka!